ကိုယ့်ကလေးကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဘာမှမဖြစ်ခင်မှာ အချိန်မှီဘယ်လိုတားဆီးမလဲ » Today Bago
HomeLifestyleSex Educationကိုယ့်ကလေးကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဘာမှမဖြစ်ခင်မှာ အချိန်မှီဘယ်လိုတားဆီးမလဲ ကိုယ့်ကလေးကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဘာမှမဖြစ်ခင်မှာ အချိန်မှီဘယ်လိုတားဆီးမလဲ May 26, 20170comments Nandar Lwin Posted in Sex Education0အခုရေးထားတာက Australia Child abuse Royal Commission ကနေ မိဘ ဆရာတွေ တခြားတာဝန်ရှိသူတွေ သတိထားဖို့ထုတ်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေနှင့် Oprah မှာ Forensic psychiatrist Dr. Michael Welner ပြောထားတာတွေကို မှီကိုးထားတာပါ
1. ကလေးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ပြင်ဆင်လဲ
Australia မှာကလေးတွေကို ကိုယ့်ကို လူတစ်ယောက်က လာရောက်ချဉ်းကပ်လာရင် ဘယ်လိုအပြုအမူတွေကို ရှောင်ရမယ်ဆိုတာ ကျောင်းမှာလည်းသင်ပေးပါတယ် ဒီမှာတော့ grooming လို့ပြောနိုင်တဲ့ မသင့်တော်တဲ့ အပြုအမူတွေ ကလေးကို သွားလုပ်နေရင်တောင် ပြစ်မူအနေနှင့် တရားစွဲလို့ရပါတယ်
Grooming ဆိုတာ နည်းအမျိုးမျိုး ပုံစံမျိုးစုံနှင့် အားနည်းချက်ရှိနေတဲ့ ကလေးရဲ့ ယုံကြည်ချက်ရအောင်ကြိုးစားပြီး ကိုယ့်လိုချင်တာကို အခွင့်အရေးရအောင် ယူတာပါ
Grooming ကများသောအားဖြင့် မမြင်ကွယ်ရာမှာ ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး လူအများရှေ့မှာတင်ပဲ ဖြစ်တာပါ ဥပမာ ကျောင်း, ဘာသာရေးကျောင်း, အသိမိတ်ဆွေအမျိုးတွေရဲ့ အိမ်တွေမှာ ဖြစ်တာပါ။ Grooming က ကလေးကိုတင်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ကလေးရဲ့ အုပ်ထိန်းသူကိုလည်း ကလေးနှင့် အနီးစပ်နေရအောင် ယုံကြည်ရအာင်
ကြိုးစားပါတယ် Grooming တော်တော်များများက ဘာမှ မထူးဆန်းပါဘူး ကလေးကို ချစ်လို့ သနားလို့ဆိုတဲ့ ရိုးရိုးသားသား ပုံစံမျိုးနှင့်စတာပါပဲ နောက်ကွယ်က သူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကသာ မရိုးသားတာပါ
2. ရည်ရွယ်ချက်ကို ဘယ်လိုသိမလဲ
အမြဲသတိထားပါ ဘယ်နေရာမဆို ကိုယ့်မျက်စိရှေ့တင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကိုယ့်ကလေးကို အရမ်းချစ်သလို ဂရုစိုက်သလိုကနေ စတက်ပါတယ် ကလေးကို လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့ ဈေးကြီးတဲ့ဆော့စရာ အရုပ်တွေ ဝယ်ပေးတက်တယ်။ နောက်အရေးကြီးတာတခုက ကလေးနှင့်သူ့ရဲ့ ဆက်ဆံမူကို လျိုဝှက်ချက်အနေနှင့် ဘယ်သူမှ မပြောဖို့ မှာတက်တယ် ကလေးရဲ့ ခန္တာကိုယ်ကို ထိကိုင်ဖို့ကြိုးစားတက်တယ်
3. ကလေးတွေကို မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူ သုံးမျိုးရှိပါတယ်
အဲဒါသိခြင်းဖြင့် အဲလိုလူတွေနှင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရှောင်နိုင်ပါတယ်
– Predatory perpetrators လို့ခေါ်တဲ့သူတွေက paedophilia (ကလေးသူငယ်တွေကို မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေပါ), သူတို့က ကလေးတွေကိုပဲ ကြိုက်ပါတယ် သူတို့က ကလေးကို မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ နည်းမျိုးစုံနှင့်ကြိုးစားပါမယ် ကလေးကို အရုပ်တွေ မုန့်တွေပေးကာ ယုံကြည်မူရအောင်လုပ်ပါမယ်
– Opportunistic perpetrators ကတော့ ကလေးက်ို မဟုတ်တာ လုပ်တဲ့အပြင် တခြားပြစ်မူတွေလည်း ကျုးလွန်တဲ့သူမျိုးပါ ကလေးလူကြီးမရွေး မဟုတ်တာ လုပ်ပါတယ် များသောအားဖြင့် ကလေးမှာ လူကြီးအုပ်ထိန်းမူ အားနည်းနေလို့ လူကြီးအနားမှာ မရှိလို့ ဖြစ်တာများပါတယ်
– Situational perpetrators ဆိုတာ ကလေးကိုချည်း ကြိုက်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး သူတို့မှာ လူကြီးနှင့် ဖိုမဆက်ဆံမူ မရှိလို့ မလုပ်နိုင်လို့ အခွင့်အရေးရပါက ကလေးကို မဟုတ်လုပ်တာပါ
4. သတိရမယ့် အခြေအနေ ကိုးချက်ပါ
အရမ်းကူညီတဲ့သူ – များသောအားဖြင့် အဖေမရှိတဲ့ကလေးတွေကို သနားလို့လာကူညီတယ်ဆိုတာမျိုးပါ မိဘက အလုပ်အရမ်းရှုပ်နေလို့ ကိုယ့်ကလေးကို လာကူထိန်းပေးတာမျိုးပါ ကလေးကို လုပ်ပေးသင့်တာ ကူညီသင့်တာထက် စေတနာပိုနေတဲ့သူ မျိုးပါ
ကလေးတွေနှင့်အမြဲအချိန်ကုန်နေတဲ့သူ – ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထက် ကလေးတွေနှင့် ပိုအချိန်ဖြုန်းနေတဲ့သူ ပိုက်ဆံအကုန်ခံတဲ့သူ မျိုးပါ အများအမြင် ကလေးသိပ်ချစ်တဲ့သူမျိုးပါ ကလေးတကယ်ချစ်တဲ့သူ တွေရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် ပုံမှန်လူတွေက ကလေးတွေကို ချစ်သလို ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနှင့်လည်း စကားပြောချင်ပါတယ်
ကလေးတွေကို အမြဲထိကိုင်ချင်သူ – အဲလိုလူတွေကကလေးတွေ သူတို့နှင့်ကိုယ်လက်ထိတွေ့ရတာ ကျင့်သားရစေချင်ပါတယ် ။ ကလေးတွေက်ို တချိန်လုံး ဖက်မယ် နမ်းမယ် ကိ်ုင်မယ် ကလိထိုးမယ် တက်နိုင်သလောက် အခွင့်အရေးရသလို ထိတွေ့နေပါမယ် တခါတလေ ကလေးရဲ့ မသင့်တော်တဲ့နေရာတွေတောင် ထိပြီး ကလေးက ပြန်ပြောသလားလို့ စမ်းကြည့်ပါမယ် များသောအားဖြင့်ဒါတွေက လူအများရှေ့မှာတင် ဖြစ်တာပါ
ကလေးရဲ့အထူးသူငယ်ချင်း – ကလေးကို ဈေးကြီးတဲ့ လက်ဆောင်တွေ ခဏခဏပေးမယ် အထူးအခွင့်အရေးပေးမယ် ကလေးသွားချင်တဲ့နေရာကို ခေါ်သွားမယ် ကိုယ်ကလေးကို လူတစ်ယောက်က လိုအပ်တာထက် အထူးအခွင့်အရေး အရမ်းပေးနေရင် သတိထားသင့်ပါတယ်
ကလေးတွေသူဆီလာအောင်လုပ်တာ – သူမှာကလေးမရှိပေမယ့် ကလေးကစားစရာတွေ အများကြီး ဝယ်ထားပြီး ကလေးတွေကို သူအိမ်လာအောင် သူဆီမှာ ပျော်အောင်လုပ်တာပါ ဘယ်တော့မှကိုယ့်ကလေးကို အဲလို အိမ်တစ်ယောက်တည်း မလွှတ်ပါနှင့်
ကလေးကိုနားလည်တဲ့သူ – ကလေးတွေအကုန်လုံးက မိဘက စည်းကမ်းသတ်မှတ်တာကို မကြိုက်ကြပါဘူး ကလေးက မိဘတွေကို မကြိုက်တာ မကျေနပ်တာကို သူနားလည်ကြောင်း ပြောမယ် ကလေးက်ို နှစ်သိမ့်မယ် မိဘ ခွင့်မပြုတဲ့ ကလေး လုပ်ချင်တာတွေကို နောက်ကွယ်မှာ ပေးလုပ်ပေးမယ် ကလေးရဲ့ယုံကြည်မူကို ရယူပါလိမ့်မယ်
ကိုယ့်ယုံကြည်မူကို အသုံးချခြင်း – ကိုယ်က ကလေးထိန်းကို စိတ်ချရတဲ့သူကိုဌားထားတာပါ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ချတဲ့သူက နေမကောင်းဘူး မအားလို့ တခြားအစားထိုးလူတစ်ယောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ် ကိုယ့်ကလည်း ကိုယ့်ယုံရတဲ့သူက လွှတ်တာပဲ တစ်ရက်ပဲ တစ် ပတ်ပဲဆိုပြီး လက်ခံလိုက်ပါတယ် ကိုယ့်ယုံကြည်မူကို အရင်ရအောင်လုပ်ပြီး အသုံးချတာပါ
ထူးချွန်တဲ့ကလေး – ကိုယ့်မှာ အားကစားဒါမဟုတ် အနုပညာထူးချွန်တဲ့ကလေးရှိပါတယ် ဒါကြောင့်ကလေးကို သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့သူနှင့် တနေ့လုံး နှစ်ယောက်တည်း လွှတ်ထားပါတယ် ကိုယ့်ကလေး ကို တကယ်စေတနာထား သင်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် မဟုတ်တာ လုပ်ဖို့လည်းသူမှာ အခွင့်အရေး အများကြီးရသွားပါတယ်
ကိုယ်မထင်တဲ့သူ – ကိုယ့်ကလေးနှင့်တကယ်ယုံကြည်ရတဲ့သူ ကိုယ်ဘယ်တော့မှ မဟုတ်တာလုပ်မယ်လို့ မထင်တဲ့သူက လုပ်တာမျိုးပါ
ကလေးတွေကို မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ 90% ကမိဘက သိတဲ့သူတွေပါ 40%က ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ကိုယ့်မိသားစုမောင်နှမ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းထဲကပါ 50% ကသူငယ်ချင်း ဆရာဆရာမ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အိမ်နီးနားချင်းတွေက လုပ်တာပါ
5. ကလေးကို မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်သလဲ ဘယ်လို အဆင့်တွေရှိသလဲ
Stage 1: အရင်ရွေးချယ်တယ်
ဘယ်လိုကလေးမျိုးက လွယ်ကူမလဲ ဥပမာ တစ်ယောက်တည်းခေါ်သွားလို့လွယ်လား အားနည်းချက်ဘာရှိလဲ လူကြီးမိဘက အလုပ်များလို့ သေချာဂရုမစိုက်နိုင်ရင် ပိုကြိုက်ပါတယ်
Stage 2: ယုံကြည်မူရအောင်ယူတယ်
ကလေးက်ို စောင့်ကြည့်ပြီး ကလေးနှင့်ပက်သက်တဲ့ အချက်တွေရအောင်ရယူတယ် ကလေးမိဘ ကလေးထိန်းနှင့် ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပါတယ် ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုလူပ်ရှားရမယ်ဆိုတာ စီစဉ်အကွက်ချပါတယ်
Stage 3: လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ပေးတယ် ကူညီတယ်
ကလေးက်ို အရမ်းချစ်ပြတယ် လိုအပ်တာတွေကူညီတယ် ကလေးဘဝမှာ အရေးကြီးတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတယ် လက်ဆောင်ပေးတယ် ကလေးနှင့် လိုအပ်တာထက် အချိန်ဖြုန်းတယ်
Stage 4: ကလေးကို တစ်ယောက်တည်းခွဲထုတ်မယ်
ယုံကြည်ရပြီးတဲ့အခါ ကလေးနှင့်သူနှင့် နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်မယ့်အခြေအနေမျိုး ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ် အခွင့်အရေးယူပါမယ် ကလေးက သူကိုချစ်တယ်လို့ခံစားရအောင် ဆက်ဆံရေး ကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားမယ်
Stage 5: မဟုတ်တာစသင်ပေးခြင်း
ကလေးဆီက ယုံကြည်မူရတဲ့အခါ ကလေးက်ို မဟုတ်လုပ်ဖို့ စပါတော့မယ် ကလေးက်ို မဟုတ်တဲ့ပုံပြင်တွေ ဓါတ်ပုံတွေ ရုပ်ရှင်တွေပြမယ် ဥပမာ ကလေးနှင့်နှစ်ယောက်တည်း ရေကူးသွားမယ်ဆိုတာတွေ လုပ်ပါမယ်
ကလေးဆိုတာ စူးစမ်းတဲ့သဘာဝရှိတဲ့အတွက် သူက်ို မဟုတ်တာ သင်ပေးတာတွေ အထူးအဆန်းလုပ်တာတွေကို သဘောကျနေတက်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ကောင်းတယ် ထင်နေတက်ပါမယ်
Stage 6: ထိန်းချုပ်ထားခြင်း
ကလေးက်ို မဟုတ်တာလုပ်တာကို မိဘပြန်မပြောအောင် လျို့ဝှက်ထားခိုင်းခြင်း ကလေးကို အဲလိုဖြစ်တာသူ့အပြစ်လို့ ချိန်းခြောက်ထားခြင်း ဖြင့် ကလေးကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်
ကိုယျ့ကလေးကို ဘယျလိုကာကှယျမလဲ ဘာမှမဖွဈခငျမှာ အခြိနျမှီဘယျလိုတားဆီးမလဲ
အခုရေးထားတာက Australia Child abuse Royal Commission ကနေ မိဘ ဆရာတှေ တခွားတာဝနျရှိသူတှေ သတိထားဖို့ထုတျထားတဲ့ စာရှကျစာတမျးတှနှေငျ့ Oprah မှာ Forensic psychiatrist Dr. Michael Welner ပွောထားတာတှကေို မှီကိုးထားတာပါ
1. ကလေးကို ဘယျလိုရှေးခယျြပွငျဆငျလဲ
Australia မှာကလေးတှကေို ကိုယျ့ကို လူတဈယောကျက လာရောကျခဉျြးကပျလာရငျ ဘယျလိုအပွုအမူတှကေို ရှောငျရမယျဆိုတာ ကြောငျးမှာလညျးသငျပေးပါတယျ ဒီမှာတော့ grooming လို့ပွောနိုငျတဲ့ မသငျ့တျောတဲ့ အပွုအမူတှေ ကလေးကို သှားလုပျနရေငျတောငျ ပွဈမူအနနှေငျ့ တရားစှဲလို့ရပါတယျ
Grooming ဆိုတာ နညျးအမြိုးမြိုး ပုံစံမြိုးစုံနှငျ့ အားနညျးခကျြရှိနတေဲ့ ကလေးရဲ့ ယုံကွညျခကျြရအောငျကွိုးစားပွီး ကိုယျ့လိုခငျြတာကို အခှငျ့အရေးရအောငျ ယူတာပါ
Grooming ကမြားသောအားဖွငျ့ မမွငျကှယျရာမှာ ဖွဈတာမဟုတျပါဘူး လူအမြားရှမှေ့ာတငျပဲ ဖွဈတာပါ ဥပမာ ကြောငျး, ဘာသာရေးကြောငျး, အသိမိတျဆှအေမြိုးတှရေဲ့ အိမျတှမှော ဖွဈတာပါ။ Grooming က ကလေးကိုတငျလုပျတာ မဟုတျပါဘူး ကလေးရဲ့ အုပျထိနျးသူကိုလညျး ကလေးနှငျ့ အနီးစပျနရေအောငျ ယုံကွညျရအာငျ
ကွိုးစားပါတယျ Grooming တျောတျောမြားမြားက ဘာမှ မထူးဆနျးပါဘူး ကလေးကို ခဈြလို့ သနားလို့ဆိုတဲ့ ရိုးရိုးသားသား ပုံစံမြိုးနှငျ့စတာပါပဲ နောကျကှယျက သူရဲ့ ရညျရှယျခကျြကသာ မရိုးသားတာပါ
2. ရညျရှယျခကျြကို ဘယျလိုသိမလဲ
အမွဲသတိထားပါ ဘယျနရောမဆို ကိုယျ့မကျြစိရှတေ့ငျဖွဈနိုငျပါတယျ ကိုယျ့ကလေးကို အရမျးခဈြသလို ဂရုစိုကျသလိုကနေ စတကျပါတယျ ကလေးကို လိုအပျတာထကျပိုတဲ့ စြေးကွီးတဲ့ဆော့စရာ အရုပျတှေ ဝယျပေးတကျတယျ။ နောကျအရေးကွီးတာတခုက ကလေးနှငျ့သူ့ရဲ့ ဆကျဆံမူကို လြိုဝှကျခကျြအနနှေငျ့ ဘယျသူမှ မပွောဖို့ မှာတကျတယျ ကလေးရဲ့ ခန်တာကိုယျကို ထိကိုငျဖို့ကွိုးစားတကျတယျ
3. ကလေးတှကေို မဟုတျတာလုပျတဲ့သူ သုံးမြိုးရှိပါတယျ
အဲဒါသိခွငျးဖွငျ့ အဲလိုလူတှနှေငျ့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အခွအေနကေို ရှောငျနိုငျပါတယျ
– Predatory perpetrators လို့ချေါတဲ့သူတှကေ paedophilia (ကလေးသူငယျတှကေို မဟုတျတာလုပျတဲ့သူတှပေါ), သူတို့က ကလေးတှကေိုပဲ ကွိုကျပါတယျ သူတို့က ကလေးကို မဟုတျတာလုပျဖို့ နညျးမြိုးစုံနှငျ့ကွိုးစားပါမယျ ကလေးကို အရုပျတှေ မုနျ့တှပေေးကာ ယုံကွညျမူရအောငျလုပျပါမယျ
– Opportunistic perpetrators ကတော့ ကလေးကျို မဟုတျတာ လုပျတဲ့အပွငျ တခွားပွဈမူတှလေညျး ကြုးလှနျတဲ့သူမြိုးပါ ကလေးလူကွီးမရှေး မဟုတျတာ လုပျပါတယျ မြားသောအားဖွငျ့ ကလေးမှာ လူကွီးအုပျထိနျးမူ အားနညျးနလေို့ လူကွီးအနားမှာ မရှိလို့ ဖွဈတာမြားပါတယျ
– Situational perpetrators ဆိုတာ ကလေးကိုခညျြး ကွိုကျတဲ့သူမြိုးမဟုတျပါဘူး သူတို့မှာ လူကွီးနှငျ့ ဖိုမဆကျဆံမူ မရှိလို့ မလုပျနိုငျလို့ အခှငျ့အရေးရပါက ကလေးကို မဟုတျလုပျတာပါ
4. သတိရမယျ့ အခွအေနေ ကိုးခကျြပါ
အရမျးကူညီတဲ့သူ – မြားသောအားဖွငျ့ အဖမေရှိတဲ့ကလေးတှကေို သနားလို့လာကူညီတယျဆိုတာမြိုးပါ မိဘက အလုပျအရမျးရှုပျနလေို့ ကိုယျ့ကလေးကို လာကူထိနျးပေးတာမြိုးပါ ကလေးကို လုပျပေးသငျ့တာ ကူညီသငျ့တာထကျ စတေနာပိုနတေဲ့သူ မြိုးပါ
ကလေးတှနှေငျ့အမွဲအခြိနျကုနျနတေဲ့သူ – ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှထေကျ ကလေးတှနှေငျ့ ပိုအခြိနျဖွုနျးနတေဲ့သူ ပိုကျဆံအကုနျခံတဲ့သူ မြိုးပါ အမြားအမွငျ ကလေးသိပျခဈြတဲ့သူမြိုးပါ ကလေးတကယျခဈြတဲ့သူ တှရှေိပါတယျ ဒါပမေယျ့ ပုံမှနျလူတှကေ ကလေးတှကေို ခဈြသလို ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှနှေငျ့လညျး စကားပွောခငျြပါတယျ
ကလေးတှကေို အမွဲထိကိုငျခငျြသူ – အဲလိုလူတှကေကလေးတှေ သူတို့နှငျ့ကိုယျလကျထိတှရေ့တာ ကငျြ့သားရစခေငျြပါတယျ ။ ကလေးတှကျေို တခြိနျလုံး ဖကျမယျ နမျးမယျ ကျိုငျမယျ ကလိထိုးမယျ တကျနိုငျသလောကျ အခှငျ့အရေးရသလို ထိတှနေ့ပေါမယျ တခါတလေ ကလေးရဲ့ မသငျ့တျောတဲ့နရောတှတေောငျ ထိပွီး ကလေးက ပွနျပွောသလားလို့ စမျးကွညျ့ပါမယျ မြားသောအားဖွငျ့ဒါတှကေ လူအမြားရှမှေ့ာတငျ ဖွဈတာပါ
ကလေးရဲ့အထူးသူငယျခငျြး – ကလေးကို စြေးကွီးတဲ့ လကျဆောငျတှေ ခဏခဏပေးမယျ အထူးအခှငျ့အရေးပေးမယျ ကလေးသှားခငျြတဲ့နရောကို ချေါသှားမယျ ကိုယျကလေးကို လူတဈယောကျက လိုအပျတာထကျ အထူးအခှငျ့အရေး အရမျးပေးနရေငျ သတိထားသငျ့ပါတယျ
ကလေးတှသေူဆီလာအောငျလုပျတာ – သူမှာကလေးမရှိပမေယျ့ ကလေးကစားစရာတှေ အမြားကွီး ဝယျထားပွီး ကလေးတှကေို သူအိမျလာအောငျ သူဆီမှာ ပြျောအောငျလုပျတာပါ ဘယျတော့မှကိုယျ့ကလေးကို အဲလို အိမျတဈယောကျတညျး မလှတျပါနှငျ့
ကလေးကိုနားလညျတဲ့သူ – ကလေးတှအေကုနျလုံးက မိဘက စညျးကမျးသတျမှတျတာကို မကွိုကျကွပါဘူး ကလေးက မိဘတှကေို မကွိုကျတာ မကနြေပျတာကို သူနားလညျကွောငျး ပွောမယျ ကလေးကျို နှဈသိမျ့မယျ မိဘ ခှငျ့မပွုတဲ့ ကလေး လုပျခငျြတာတှကေို နောကျကှယျမှာ ပေးလုပျပေးမယျ ကလေးရဲ့ယုံကွညျမူကို ရယူပါလိမျ့မယျ
ကိုယျ့ယုံကွညျမူကို အသုံးခခြွငျး – ကိုယျက ကလေးထိနျးကို စိတျခရြတဲ့သူကိုဌားထားတာပါ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့စိတျခတြဲ့သူက နမေကောငျးဘူး မအားလို့ တခွားအစားထိုးလူတဈယောကျထညျ့ပေးလိုကျတယျ ကိုယျ့ကလညျး ကိုယျ့ယုံရတဲ့သူက လှတျတာပဲ တဈရကျပဲ တဈ ပတျပဲဆိုပွီး လကျခံလိုကျပါတယျ ကိုယျ့ယုံကွညျမူကို အရငျရအောငျလုပျပွီး အသုံးခတြာပါ
ထူးခြှနျတဲ့ကလေး – ကိုယျ့မှာ အားကစားဒါမဟုတျ အနုပညာထူးခြှနျတဲ့ကလေးရှိပါတယျ ဒါကွောငျ့ကလေးကို သငျကွားပေးနိုငျတဲ့သူနှငျ့ တနလေုံ့း နှဈယောကျတညျး လှတျထားပါတယျ ကိုယျ့ကလေး ကို တကယျစတေနာထား သငျပေးနတောလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ မဟုတျတာ လုပျဖို့လညျးသူမှာ အခှငျ့အရေး အမြားကွီးရသှားပါတယျ
ကိုယျမထငျတဲ့သူ – ကိုယျ့ကလေးနှငျ့တကယျယုံကွညျရတဲ့သူ ကိုယျဘယျတော့မှ မဟုတျတာလုပျမယျလို့ မထငျတဲ့သူက လုပျတာမြိုးပါ
ကလေးတှကေို မဟုတျတာလုပျတဲ့သူတှရေဲ့ 90% ကမိဘက သိတဲ့သူတှပေါ 40%က ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ ကိုယျ့မိသားစုမောငျနှမ ဆှမြေိုး မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးထဲကပါ 50% ကသူငယျခငျြး ဆရာဆရာမ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြ အိမျနီးနားခငျြးတှကေ လုပျတာပါ
5. ကလေးကို မဟုတျတာလုပျဖို့ ဘယျလိုပွငျဆငျသလဲ ဘယျလို အဆငျ့တှရှေိသလဲ
Stage 1: အရငျရှေးခယျြတယျ
ဘယျလိုကလေးမြိုးက လှယျကူမလဲ ဥပမာ တဈယောကျတညျးချေါသှားလို့လှယျလား အားနညျးခကျြဘာရှိလဲ လူကွီးမိဘက အလုပျမြားလို့ သခြောဂရုမစိုကျနိုငျရငျ ပိုကွိုကျပါတယျ
Stage 2: ယုံကွညျမူရအောငျယူတယျ
ကလေးကျို စောငျ့ကွညျ့ပွီး ကလေးနှငျ့ပကျသကျတဲ့ အခကျြတှရေအောငျရယူတယျ ကလေးမိဘ ကလေးထိနျးနှငျ့ ရငျးနှီးအောငျလုပျပါတယျ ဘယျအခြိနျမှာ ဘယျလိုလူပျရှားရမယျဆိုတာ စီစဉျအကှကျခပြါတယျ
Stage 3: လိုအပျခကျြတှေ ဖွညျ့ပေးတယျ ကူညီတယျ
ကလေးကျို အရမျးခဈြပွတယျ လိုအပျတာတှကေူညီတယျ ကလေးဘဝမှာ အရေးကွီးတဲ့သူဖွဈအောငျကွိုးစားပါတယျ လကျဆောငျပေးတယျ ကလေးနှငျ့ လိုအပျတာထကျ အခြိနျဖွုနျးတယျ
Stage 4: ကလေးကို တဈယောကျတညျးခှဲထုတျမယျ
ယုံကွညျရပွီးတဲ့အခါ ကလေးနှငျ့သူနှငျ့ နှဈယောကျတညျးဖွဈမယျ့အခွအေနမြေိုး ဖွဈအောငျကွိုးစားမယျ အခှငျ့အရေးယူပါမယျ ကလေးက သူကိုခဈြတယျလို့ခံစားရအောငျ ဆကျဆံရေး ကိုတိုးတကျအောငျကွိုးစားမယျ
Stage 5: မဟုတျတာစသငျပေးခွငျး
ကလေးဆီက ယုံကွညျမူရတဲ့အခါ ကလေးကျို မဟုတျလုပျဖို့ စပါတော့မယျ ကလေးကျို မဟုတျတဲ့ပုံပွငျတှေ ဓါတျပုံတှေ ရုပျရှငျတှပွေမယျ ဥပမာ ကလေးနှငျ့နှဈယောကျတညျး ရကေူးသှားမယျဆိုတာတှေ လုပျပါမယျ
ကလေးဆိုတာ စူးစမျးတဲ့သဘာဝရှိတဲ့အတှကျ သူကျို မဟုတျတာ သငျပေးတာတှေ အထူးအဆနျးလုပျတာတှကေို သဘောကနြတေကျပွီး သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ဆကျဆံရေးကို ကောငျးတယျ ထငျနတေကျပါမယျ
Stage 6: ထိနျးခြုပျထားခွငျး
ကလေးကျို မဟုတျတာလုပျတာကို မိဘပွနျမပွောအောငျ လြို့ဝှကျထားခိုငျးခွငျး ကလေးကို အဲလိုဖွဈတာသူ့အပွဈလို့ ခြိနျးခွောကျထားခွငျး ဖွငျ့ ကလေးကို ထိနျးခြုပျထားနိုငျပါတယျ
0 comments Sex Education ကလေးများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း
ချစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလား??	May 26, 2017	0 comments Facebook မှာLike များများရအောင် မြင့်မားတဲ့တိုက်ပေ...	May 26, 2017	0 comments Share this 9SHARESFacebookTwitterGooglePinterestRedditTumblr